Imfuno yentengiso yeiglavu ezilahlwayo
Imfuno yeiglavu yahlulwe yangamacandelo amane; Unonophelo lwezonyango, i-inshurensi yezabasebenzi, ushishino kunye nevenkile ezinkulu, kunye nemizi-mveliso yenkonzo. Phakathi kwazo, iiglavu zonyango kunye neigloves zabalelwa kwi-62% yosetyenziso lulonke. Ngokwengxelo yeZiko laseYurophu lezifo C ...
Imowudi yokusebenza yenqanaba le-nitrile / umgca wemveliso yeglavu
Iiglavu zokucoca inzala zinokwahlulwa zibe ziindidi ezimbini: 1. Emva kokuba iiglavu ze-nitrile / latex zihluthwe kumgca wokuvelisa iiglavu, zibalwa ngomatshini, zipakishwe ngesandla, zize zithunyelwe kwizixhobo zokucoca inzala ye-ethylene oxide emva kokubekwa. Iiglavu ezinjalo g ...
U-Chuangmei Okrelekrele uthathe inxaxheba kumboniso wesihlanu wezoRhwebo lweHlabathi weZinto zokuThintela uBhubhane
"IBelt kunye neNdlela" bre Isifinyezo: I-B & R the ligama elifutshane "leSilk Road Economic Belt" kunye "nekhulu lama-21 lwaselwandle Road". Kwaye linyathelo elaphakanyiswa nguMongameli wase-China u-Jinping Xi ngo-Septemba nango-Okthobha u-2013. “IBelt and Road” ihamba kwilizwekazi ...
Inkqubo yokuhlamba iichlorine yohlobo lweiglavu zokwenza iiglavu ezizenzekelayo
Yintoni inkqubo yokuhlamba iklorine? Kutheni le nto izixhobo zokwenza isikhuseli senitrile zisebenzisa inkqubo yokuhlamba iklorine? Njengoko iiglavu ezingenawo umgubo ziye zaba yimveliso ebalulekileyo yokukhusela isandla esombulula ingxaki yeglavu yokunxiba kunye nokunciphisa ifuthe lesikhuseli somgubo kumsebenzisi, ...
Iiglavu zilahlwe ezilahlwayo
Ukuqaliswa iiglavu zilahlwe zilahlwayo ezilahlwayo iiglavu zilahlwe luhlobo izinto zokwenziwa imichiza, eyenziwe acrylonitrile kunye butadiene ngokusebenzisa inkqubo ekhethekileyo kunye nokuphuculwa ifomula. Ukuphefumla kunye nentuthuzelo kufutshane neiglavu zelatex, kwaye ayizukubangela nasiphi na isikhumba ...
UChuangMei okrelekrele uyakukhumbuza: kukho umngcipheko kulwakhiwo lweigloves, utyalomali kufuneka ulumke.
Iziganeko zamva nje zokufumanisa i-coronavirus entsha kukutya okubandayo okungeniswe ngaphandle zisikhumbuze kaninzi ukuba kufuneka sinxibe iigloves xa sidibana nokutya okutsha okanye okubandisiweyo. Kwangelo xesha, kubomi bokwenyani, iibhaktheriya kumathontsi anokuhlala kumphezulu wayo nayiphi na impahla yoluntu kangange-24 h ...
Umthengi wethu waseTshayina u-Hebei utyale imali kwimigca yeiglavu ezi-8 zePVC ukufaka isandla kulwakhiwo lwalo bhubhane.
Ngexesha lesifo seCoronavirus se-2019 ubhubhane, Imfuno yeiglavu ezilahlwayo ze-PVC iyanda, enokuthi ichaze iintsholongwane. Iiglavu ezikumgangatho ophezulu ze-PVC, indawo yonke yezandla zasekhohlo nezasekunene, ekulula ukuyinxiba, ngaphandle kokucaphuka kolusu, ukungabikho komzimba, efanelekileyo kwigumbi elicocekileyo / kwigumbi elicocekileyo / kwiworkshop yokucoca ...
Uhlalutyo lobume bophuhliso kunye nethemba lokuthengisa kwimveliso yokhuseleko lwezandla ngo-2021
Abantu kufuneka bavezwe kwimisebenzi enobungozi efana nokubola kwemichiza, imitha yombane, izixhobo zoomatshini, kunye nezixhobo zombane ngexesha lokuvelisa okanye lokusebenza. Ngophuhliso oluqhubekayo lwamashishini, imeko yezabasebenzi ...